मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्भवतः अाजै, काे काे बन्दै छन् मन्त्री ? - HAMRO YATRA
मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्भवतः अाजै, काे काे बन्दै छन् मन्त्री ?
काठमाडौं, १० फागुन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्भवतः आजै (बिहीबार) मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन् । सरकारमा दुईतिहाइको कसरत भर्इ रहेका कारण भागबण्डा नमिल्दा बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सकेन ।
प्रधानमन्त्री ओली सकभर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय फोरमलाई समेत सहभागी गराई दुईतिहाइको सरकार सञ्चालनको कसरतमा छन्। त्यसका लागि उनले निर्वाचन परिणाम आएदेखि नै यादवलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्।
सोमबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनले प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमै यादवलाई बोलाई सरकारमा आउन संयुक्त आग्रह मात्रै गरेनन्, बुधबार दुई पार्टीका प्रतिनिधिबीच औपचारिक छलफल नै गराएर सरकारमा आउन प्रस्ताव राखे । मन्त्रिपरिषद्को संख्या केही तल–माथि गरेरै भए पनि सरकारमा ल्याउने तयारीमा ओली रहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली र दाहालबीच १९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने विषयमा करिब–करिब समझदारी जुटेको छ। ओली–दाहालबीच बुधबार बालुवाटारमा भएको वार्तामा पनि मन्त्रालय संख्या र भागबन्डाका विषयमा कुराकानी भएको ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए।
अाकांक्षीकाे लिस्ट लामै
को को छन् अाकांक्षी ?